बालबालिकाको खाजा : किन गरिँदैछ बेवास्ता ? - Nepal Bahas Nepal Bahas
बालबालिकाको खाजा : किन गरिँदैछ बेवास्ता ?
प्रकाशित मिति : ५ असार २०७९, आईतवार १५:५२
♦ डा. अरुणा उप्रेती
पत्रुखाना भनेको काम नलाग्ने, फाल्न लायक खाद्यवस्तु हुन् तर यही पत्रु खाना हाम्रा बालबालिकाको पेटमा परेपछि उनीहरूलाई यसले कति खराब गर्दो हो भन्ने कुरा आमाबुबाले सोचेका हुँदैनन् ।
पत्रु खानाले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ भनेर नै स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथै शिक्षा मन्त्रालयले समेत समयमा चाउचाउ, चिप्स, कुरकुरेजस्ता वस्तुहरू स्कुलमा खाजाका रूपमा लैजान र स्कुलमा बेचबिखन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गरेको छ । यसले गर्दा कतिपय स्कुलमा शिक्षक शिक्षिकाले बालबालिकालाई घरबाट नै खाजा लिएर आउनुपर्छ भनी सिकाएका छन् । अनि बालबालिकाले घरबाट चिउरा, चना, आलु, रोटी आदि लिएर आउन थालेका छन् तर अझै कतिपय स्कुलमा शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीले खाजा के खान्छन् भन्ने कुरामा खासै वास्ता गरेको पाइँदैन ।
अभिभावकले समेत आफ्ना छोराछोरीले स्कुलमा खाने खाजाका बारेमा चासो दिने गरेको पाइँदैन । कुनै आमाबुबाले खाजा खान पैसा त दिन्छन् तर त्यो पैसाले स्वस्थकर खाजा खाएको छ कि छैन भन्नेबारेमा वास्ता गर्दैनन् ।
विद्यालयअघिका साथीसँग खेल्ने बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुने
५ फिट ९ इन्च अग्लो हुनुहुन्छ ? तपाइँमा हुन सक्छ दर्जनौँ स्वास्थ्य समस्या
औसत व्यक्तिले वार्षिक ४४ घण्टाको निद्रा गुमाउँदै, पुरुषभन्दा महिलामा यसको असर बढी